နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ အတွင်း ကမ္ဘာ့နေရာတချို့ရဲ့ ပြောင်းလဲသွားမှုများ - Thutazone
နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ အတွင်း ကမ္ဘာ့နေရာတချို့ရဲ့ ပြောင်းလဲသွားမှုများ
အချိန်သည် အမြဲပြောင်းလဲနေသည်။ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ မဆိုထားနှင့် ၊ ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ချိန် နှင့် ယခုအချိန်သည်ပင် မတူတော့ ၊ ခေတ်နှင့်အညီ ပတ်ဝန်းကျင် ၊ ဓလေ့ ၊ အမူအကျင့် အရာအားလုံးနီးပါး ပြောင်းလဲသွားကြပြီဖြစ်သည်။ နေရာတွေကို ကြည့်မည်ဆိုလျှင်လည်း နေရာအနည်းငယ် မပြောင်းလဲပဲ ကျန်သေးသော်လည်း နေရာအများစုမှာ အပြောင်းလဲကြီး ပြောင်းလဲခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ဒီတခါတော့ Bright Side ဝဘ်ဆိုဒ်မှ တင်ဆက်ထားသော ကမ္ဘာ့နေရာအများစု ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားသလဲ ဆိုတဲ့ နှိုင်းယှဉ်မှုပုံရိပ်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁. Sabir ဥယျာဉ် ၊ ဘာကူ ၊ အဇာဘိုင်ဂျန်
၂. ဘာကူမြို့ မြင်ကွင်း ၊ အဇာဘိုင်ဂျန်
၃. Chichén Itzá မှ Kukulkán ပိရမစ်၊ မက္ကဆီကို
၄. ရောမ Colosseum ၊ အီတလီ
၅. ဆိုးလ် ၊ တောင်ကိုရီးယား ၊
၆. Brandenburg ဂိတ်တံခါး ၊ ဘာလင် ၊ ဂျာမနီ
၇. Cavenagh တံတား ၊ စင်ကာပူမြစ်
၈. ဂိုင်ဇာမှ စဖင့်ရုပ်ကြီး ၊ အီဂျစ်
၉. Yonge လမ်း ၊ တိုရန်တို ၊ ကနေဒါ
၁၀. Ponte Vecchio တံတား ၊ ဖလော့ရင့် ၊ အီတလီ
၁၁. အီဖယ်တာဝါ ၊ ပါရီ ၊ ပြင်သစ်
၁၂. Machu Picchu ၊ ပီရူး
၁၃. မဟာရံတံတိုင်း ၊ တရုတ်
၁၄. Metropolitan Cathedral ၊ မက္ကဆီကို
၁၅. Fine Arts နန်းတော် ၊ မက္ကဆီကို
၁၆. စိန့်ပေါ Cathedral ၊ လန်ဒန် ၊ အင်္ဂလန်
၁၇. Cathedral Square ၊ မီလန် ၊ အီတလီ
၁၈. Times Square ၊ နယူးယောက်
၁၉. ဆစ်ဒနီ မြို့တော်ခန်းမ ၊ သြစတြေးလျ
၂၀. ပီဆာတာဝါ ၊ အီတလီ
၂၁. တပ်ချ်မဟာ ၊ အိန္ဒိယ
၂၂. Fytche Square (ယခု မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံ ) ၊ ရန်ကုန်
၂၃. ရွှေစည်းခုံဘုရား ၊ ပုဂံ ၊ မြန်မာ